Goob Xaflad Aroos kasocotay oo isku badashay Tacsi geeri ah iyo Ooyin iyo lama arag iyo lama maqal(Talow Maxaa Dhacay) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dalka Afghanistan waxaa duufaano iyo daad ku soo rogmaday ayaa la tagay, dhamaan dadkii ku sugnaa xaflad aroos oo ka socotay tuulo ku taala dalkaas.
Sida uu wakaaladaha wararka u sheegay afhayeen u hadlay guddoomiyaha gobolka, Saari Bool ee dalkaas, waxa inta lah hub arooskaas ku dhintay 27-qof oo arooskii ku jiro, sidoo kale waxa la laayahay oo dhoobada ku darsamay, dadka intoodi kale oo boqolaal lagu qiyaasayo.
Cabdi Fariid Faraaji oo ah afhayeenka gobolkaas, ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ku jiraan baadi goobka dad nool, meel kastana ay baadhayaan, hasa yeeshee rejadu yar tahay, sababtoo ah, waxa is guraya wakhtiga.
Dadkan ayaa la sheegay in daad ka soo fatahay dhulka ka sareeya tuuladii ay xaflada, arooska ku dhiganayeen oo aanay iska ogayn qaday, ka dibna raq iyo ruux la waayay boqolaal qof oo ku sugnaa xaflada, waxa lagu tilmaamay in ay ahayd masiibadii ugu xumayd ee ka dhacday dalkaas.
Wakaalada wararka dalka Jarmalka ayaa sheegtay in degaankaasi ku jiro, xaalad baroor diiq ah, qoysas badana ay wali, rejo ka qabaan in dadkoodi oo nool la helo, ama ay ugu danbaynta arkaan maydkoodi.